Indlu eBarkly - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlli
Uhambo olufutshane oluya kuzo zonke iivenkile zokutyela, iindawo ezinomtsalane kunye neenkonzo. Indlu endala, ephuculiweyo, ngoko ukuba ufuna ipeyinti egqibeleleyo nezinto zokuhombisa, le nto ayenzelwanga wena. Icocekile, ilula ibe itofotofo. Ilungele ukuzikhupha ngempela-veki, ukhenketho lwewayini, izinto ezenziwa yintsapho okanye iholide yokuphumla kufutshane neGrampians. 2 tvs, i-dvd + cd player, inkqubo yokwahlula, ikhitshi elinompheki wegesi kunye ne-microwave, iti kunye nekofu, ziyafumaneka. Ukulala 7, kwenza kubekho uqoqosho.
Indawo esembindini efikelelekayo ngokwenene yenza le ndlu inesitayile sendlu ilungele abahambi (uhambo olufutshane kakhulu ukusuka kwisikhululo sebhasi kunye nesikhululo sikaloliwe) kunye nabo bathanda i-wining kunye nokutya, nazo zonke iindawo zokutyela ezinkulu ezifikeleleka lula.
4.65 out of 5 stars from 165 reviews
4.65 · Izimvo eziyi-165
IArarati yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwaye uphumle. Ukhuseleke kakhulu kwaye unobuhlobo, unokufumana i-goosebumps ukwenza enye yokhenketho lwethu oludumileyo, okanye uchithe impelaveki ezolileyo undwendwela izidiliya ezininzi. Okanye ukuba awufuni kubhadula kude kakhulu nekhaya, landela nje umzila welifa elijikeleze kumbindi wedolophu, yiba nekofu yokuphumla kwiigadi ezintle zase-Alexandra Park, okanye uzifake kwisidlo esimnandi kwisitalato iBarkly.
Umbuki zindwendwe ngu- Alli
Sifake ibhokisi enesitshixo kwiveranda engaphambili kuba asizukubakho ukuze sidibane neendwendwe. Nangona kunjalo siphila nje imizuzu embalwa ngemoto kwaye sinokuqhagamshelana ngokulula ngefowuni.